Soosaarayaasha & Alaabada Burburiyeyaasha VSI - Shiinaha VSI Warshadda Burburka
GUBT waa shirkad shiineys ah oo horseed u ah soo saarista suuqyada dharka burbursan iyo qeybaha dayactirka waxayna siisay alaab iyo adeegyo tayo sare leh warshadaha macdanta iyo kaawada qoda. GUBT waxaa lagu amaanay kalsoonideeda, qibradeeda, wax soo saarkeda wanaagsan, iyo taageerada farsamo. GUBT waxay soo saartaa qaybo burbura oo loogu talagalay noocyada burburka ugu caansan adduunka, oo ay ku jiraan Metso, Sandvik, Svedala, Nordberg, Telsmith, Extec, Terex, Pegson, Trio, Powerscreen, Fintec, Finlay, Kue-Ken, Brown Lennox, Lokomo, KPI- JCI, Calaamadaha, iwm. Ku dhowaad 30 sano, GUBT waxay haysaa isla ujeeddada: si loo daboolo caqabadaha ka jira hagaajinta xirashada tayada qaybaha iyo soo saarista qaybo cusub oo xirasho leh nolol duug ah oo aad u wanaagsan. Hadafkeenu waa inaan ku siino alaab aad u fiican qiimo tartan ah si aan kuu badbaadino qarashka guud isla markaana aan u hagaajino mashiinadaada nabadgelyadooda iyo wax soo saarkooda. Haddii aad u baahan tahay xalka qaybaha burbura, fadlan isla markiiba nala soo xiriir. Waxaan nahay xamaasad iyo karti inaan ku caawinno.